musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » North Korea inopisa mumwe chombo nhasi
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mauto eSouth Korea akataura kuti North Korea ine akaridza imwe chombo nhasi, Mugovera, Chivabvu 4, 2019, na9: 06 am, kubva kunzvimbo iri padyo neWonsan, guta riri mumahombekombe kumabvazuva kwePyongyang. Sezvo zviremera zviri kuongorora iyo data pane yekumisikidzwa kwechombo, mauto eSouth Korea akange asina rumwe ruzivo nezve rwekunyora.
United State inotaura neNorth Korea pamusoro penyukireya yakamira. Zvino, North Korea yapfura pfuti-pfupi kubva kumabvazuva kwegungwa nhasi. Zviitiko zviviri izvi zvakabatana here?
Pamwe chete neyemisikidzo yemazuva ano, pakati paApril, mutungamiri weNorth Korea, Kim Jong-un, akapupurira bvunzo yekuparadzanisa neakarondedzerwa semhando nyowani yechombo chinotungamirwa. IU.S. iri kutora ichi sechiratidzo chekuti mutungamiri weNorth Korea ari kuyedza kuwana mukana mukukakavadzana kunobva kudenuclearization.
Asati maroketi maviri aya aburitswa, Kim Jong-un akasangana nemutungamiri weUS Donald Trump kuti vakurukure mukana wekuti US ibvise masanctions kuNorth Korea mukutengesa kubvisa zvombo zvenyukireya munyika yaKim. Mhinduro yaTrump yaive kwete - zvaive zvese kana pasina; zvirango zvese zvaizobviswa kana zvombo zvese zvenyukireya zvikaparadzwa.
Kim Jong-un akapikira kuti vanhu vake vachatofanira kurarama pamusoro pemvura nemhepo chete vasati vapa kumanikidziro epasi rose maererano nezvombo zvake zvenyukireya.